Maalinta: Sebtember 5, 2018
Marnaba Laga Tago Gaadiidka Burcad-badeedda ee Manisa
Si looga hortago gaadiidleyda burcad-badeednimada ee gobolka oo dhan, Dowlada Hoose ee Magaalada Manisa waxay kordhisay kontoroolkeeda waxayna baaritaan ku sameysay kuwa sameeya burcad-badeednimada Akhisar ayagoon fasax haysan. Kooxaha Amniga iyo Gendarmerie [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa u beddeleysa Salim Dervişoğlu Street waddo laba jibaar ah iyada oo howlaheedii ballaarinta ay tahay. 42 Kadib markaad dhammeyso shaqooyinka laga soo bilaabo aagga guryaha ilaa Çuhane Street, 2 waa laba jibaar laba jibaaran [More ...]
Dawlada Hoose ee Bursa, qof walba wuxuu ka hadlayaa socodka, sarrifka lacagaha qalaad iyo sicirka kororka iyo korodhka sicirka jawi halkaas oo ka yimid warka wanaagsan ee sicir-dhimista. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Alinur Aktaş, 17 Sebtember [More ...]
Hagaajinta xarumaha Ak Educationay ee Waxbarashada iyo Madadaalada Sida Natiijada Tender Republic of Turkey Railways Maamulka Tcdd 3. 2018 / 399867 GCC qiimaha xaddidan ee Adeegga Iibsiga Gobolka iyo Maareynta Adeegga Xakamaynta Xawaaladda (TCDD) 8.083.363,87 [More ...]
Qoraaga Republican-ka Çiğdem Toker wuxuu dhaleeceeyey hindisooyinka laga sameeyay garoonka diyaaradaha 3 maqaalkiisa cinwaankiisu yahay ulaşım Gaadiidka Gawaarida Bugaha buugaagta ayaa maanta la daabacay wuxuuna cadeeyay in İETT ay noqotay hay'ad curdin ah. Articleiğdem Toker maqaalkiisa waa sida soo socota: Tiri ilaa furitaanka [More ...]
SAMULAŞ Tramvay Gazetesi Isku Diyaarinta Sahin
SAMULAŞ Tram wargeys, oo ah shirkad ka tirsan degmada Samsun ee Magaalo Weyne, ayaa qorsheyneysa Duqa Magaalada Samsun Metropolitan. Duqa Magaalada Samsun ee Magaalo Weyn Zihni Şahin wuxuu yiri “Wax soosaarka Marakanka [More ...]
Shaki la'aan Mud Mud ka mid ah dhibaatooyinka daba dheeraaday ee sanadihii la soo dhaafay, Mudanya taraafikada safka hore. Sababo badan ayaa tan loo leeyahay, dabcan. Tusaale ahaan… 8-10 Mudanya, degsiimad xeebeed aamusnaan ilaa sanadka ka hor [More ...]
Midibus Life ee Boosaaso
In kasta oo sannado badan la maalgashaday wadooyinka tareenka ee Bursa, ku tiirsanaanta baabuurta gaadiidka dadweynaha ee wata giraangiraha caagga ah uma muuqato inay dhammaanayaan. Sannado ka dib furitaanka baska ee galbeedka magaalada wuxuu isu beddelay bas yar basas oo kiiska furay [More ...]
Madaarka Osaka ee dalka Japan
Jabaan gudaheeda, duufaanta Jebi ayaa curyaamisay gaadiidka hawada, iyadoo xawaareedu saacad ka badan yahay 216 km meelaha qaar. Garoonka Diyaaradaha Osaka Kansai, oo ah garoonka saddexaad ee ugu mashquulka badan dalka, ayaa daadadku gureen. Tayfun [More ...]
Kocamaz: Mashruuca Mersin Metro waa la dhameystiray
Kocamaz: Mashruuca Mersin Metro Mashruucan wuu Dhamaaday: Duqa Magaalada Mersin ee Magaalo Weyn Burhanettin Kocamaz, Warshadaha Mersin iyo Ururka Dadka Ganacsiga (MESIAD) ayaa soo xaadiray kulanka macluumaadka. Hoolka Shirka MESİAD Erhan Deniz [More ...]
Nu Tablo oo ku yaalla Istanbul Metro
Amniga magaalada mitir ee Istanbul iyo booliska uma ogolaan Ozgurcan Tasci, mid kamid ah farshaxanada bandhigyada Istaag Istanbul Istanbulbebear inuu qabto shaqadiisa. Sarkaalka amniga ee yiri ”wiilka waxyaabaha aan habooneyn ku qasbay Taşçı inuu shaqadiisa ku xiro warqad wargeys. LGBTI + u dhaqdhaqaaq iyo farshaxan [More ...]
Nalalka gaadiidka ee ku yaala İzmir ayaa isku beddelay
Degmada Konak ee Magaalada Izmir sababtuna tahay dib-u-habeynta taraafikada ee Magaaladda Metropoliti, nalalka taraafikada ma yaraynin xooga uu noqday mid aan la soo koobi karin. Wadayaasha gereksiz Mid ka mid ah sababta loo yaqaan jamku waa iftiin aan loo baahnayn. Joogsi-iyo-go, mayl [More ...]